जीवन्त पार्टीमा विवाद हुन्छ । विपरीत तत्वको एकता, संघर्ष र रूपान्तरण हुन्छ । पार्टी त्यसैको केन्द्रिकरणको अभिव्यक्ति हो । त्यसमा पनि हाम्रो शक्तिशाली पार्टी अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा पुगेका, पूर्व सामन्तहरू, नव दलालहरू, केही काँग्रेसहरू, केही खास मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधि र आफुलाई अझै कम्युनिष्ट भन्न रूचाउनेहरूको संगम भएकाले पार्टीमा विवादहरू भई रहन्छ । यो पार्टी जीवनमा सामान्य कुरा हो । विशिष्ट कुरा के छ भने पार्टीमा हाल दुई पाइलट वा दुई डाइभर रहेका छन् । यो संसारमा नयाँ माने चमत्कार हो । कहीँ यस्तो देख्न पाउनु हुन्न । मान्छे हो कहिले काहीँ उहाँहरूलाई सधैं हिँडिरहेको बाटोबाट दिक्क लाग्छ र बाटो बदल्न खोज्नु हुन्छ । गति बदल्न खोज्नु हुन्छ । दिशा बदल्न खोज्नु हुन्छ । यसबाट पनि विवादको जन्म हुन्छ । कहिले पोशाक बदल्न खोज्नु हुन्छ । यसले पनि विवाद बढ्न जान्छ । कहिले खानपान बदल्ने इच्छा हुन्छ । फरक स्वाद पाइने ठाँउमा जानै पर्‍यो । जसका कारण झन विवाद हुने हुन्छ । जनतालाई विदेश पठाउन सकिएन भने झन् विवादको सृजना हुन सक्छ । विवाद मात्र नभएर कुटाकुट र काटाकाट नै हुन सक्छ । ज्यानै जान सक्छ । धन दिने साथी मित्रका काममा सहयोग गर्नै पर्‍यो । यति ठूलो जोखिम कसैले उठाउन सक्छ ? जिते हस्तिनापुरको राज हारे चपरीमुनिको बास, तपाईंहरूलाई थाहै छ । जित्ने कति हुन्छन् । हार्ने कति । खान पाउने कति नपाउने कति ? अनि पार्टी विवाद हुदैन त ? एक्लैको कुरा हो र ?
तपाईंलाई थाहै छ; लाखौं करोडौं जनताको भोटले जितेको पार्टी हो । संसदमात्र सयौं छन् । पार्टी कार्यकर्ता हजारौं हैन, लाखौं छन् । सबैको मन छ । पेट छ । परिवार छ । समाजमा इज्जत छ । यी सबैलाई चलाउनै पर्‍यो । यसका लागि यसो मित्रहरूसँग पनि दोस्ती गर्नै पर्‍यो । दोस्ती उधारो हुँदैन सबैलाई थाहै छ । उनीहरूलाई रिझाउन केही न केही दिनै पर्‍यो । रिसाए भने नाकाबन्दी गर्दिहाल्छन् । गत नाकाबन्दी पनि सल्लाहमा गरेको, कसो चाँडो जनताले थाहा पाएनन् र यो पोजिसनमा आइयो । पैसा समयमा नपठाइदिएको भए त बिजोगै हुने थियो । धन्न समयमा आयो । कार्यकर्ता र जनता दुवै खुसी भए । दुई चार साथीका कम्पनीहरूलाई आँखा नसन्काको भए गाडी, घर, सुन, बैंक ब्यालेन्स कता जुट्नु । धन्न आज अलिकति हेर्न हुने भइएको छ ।
सबै युवा विदेशिएपछि नेपालका उद्योगको के काम । सबै बन्द गरिदिनु पर्छ । बिद्युत सिद्युत बत्ती बाल्न पुगेकै छ । बढी राख्ने ठाउँ छैन । यसलाई बेचेर कमाउने हो नि । केटाहरू उतै छन् । बिद्युत पनि उतै पठाउँदा सजिलै होला । तिनीहरूका घरमा चाहिने सामान पनि उनीहरूले बनाको घरघरमा पु¥याउन बाटो बनाए भै हाल्छ । कोक, फन्टा, रक्सी आदिआदि ।
यस्तो महान् तथा गौरवशाली काम गर्न नजिकको छिमेकीलाई मात्र कति दुःख दिनु भनिकन सात समुन्दर पारको मित्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत मिलाएर गुहारेर कत्रो संघर्षले ल्याएको एमसीसी आज आएर हुन्न भन्छन् बा ! देशलाई एक्लै राखेर के फाईदा ? दिनु पर्छ । बैना खाइसकेको कुरामा पनि यसो गर्नु हुन्छ । एनसेलको झैं कुरा मिलाउनु पर्छ । आखिर पूँजीवादी विकास भनेको यही त हो । पूँजीवादीको पैसा ल्याउने र गुटुमुटु पार्ने । सबैको काम गरिदिएकाले अलिअलि दिएको पनि कसरी नलिनु ? यत्रो संघर्ष गरेर अलिअलि पनि जुगाड गर्न नसकिएत बिजेतै पो हुन्छ हो ! मिलाउने कुरामा कहाँ चुकियो ? यसरी यो स्तरमा विवाद न आउनु पर्ने ?
जनतालाई देखाएको सपनामा त विवाद छैन । उनीहरूलाई दिएका आश्वासनहरूमा त विवाद छैन । हुनतः विवाद किन हुन्थ्यो ! सिंहदरबारको सिको सबै प्रदेश र स्थानीय दरबारमा पुगेकै छ । र पनि पार्टीमा विवाद हुनु भनेको यो प्रतिक्रियावादी, पुनरूत्थानवादी, दक्षिणपन्थी, बामपन्थीहरूको तथाकथित षड्यन्त्र हुन सक्छ ! कि भुत मन्छाउने सामग्री पुगेन ? आखिर जो भए नि गर्ने त्यही हो । यो विवाद मेरै नेतृत्वमा मिलाउँछु । मिले मिलाउँछु नमिले ढलाउँछु । आखिर मान्छे रित्तोहात आउने हो । जाँदा पनि रित्तै । केको टन्टा !
तारकेश्वर, ६ धर्मस्थली
कृष्ण कुनै अलौकिक ब्यक्ति होइन मानब हुन् !